Thailandy: Nesorina ny fandraràna ny YouTube; nosakanana ny Veoh sy MetaCafe · Global Voices teny Malagasy
Thailandy: Nesorina ny fandraràna ny YouTube; nosakanana ny Veoh sy MetaCafe
Voadika ny 05 Janoary 2019 6:06 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Septambra 2007)
Nitatitra ny Bangkok Pundit androany fa nesorin'ny Minisiteran'ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana ny fandraràna ny youtube.com.
Araka ny filazan'ny The Nation, nanaisotra ny fandraràna ny YouTube ny governemanta Thailandey taorian'ny fifampiraharahana teo amin'ny tranonkala fifampizaràna lahatsary sy ny tompon'andraikitra Thailandey teo an-toerana. “Nanaiky ny hanakana izay horonan-tsary rehetra manohintohina ny vahoaka Thailandey na ireo izay manitsakitsaka ny lalàna Thailandey” ny Youtube
Nosakanana tamin'ny 4 aprily 2007 ny YouTube, izay ny Google Inc no tompony, taorian'ny fanehoan-kevitra mitsikera ny fitondram-panjaka hajaina ao amin'ny firenena tao amin'ny tranonkala: ny Mpanjaka Bhumibol Adulyadej. Nanambara tamin'ny Fikambanamben'ny Gazety Aziatika Atsimo atsinanana ny Minisitry ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana ao Thailandy, sy ny Dr Sitthichai Pookaiyaudom fa: “Rehefa manapa-kevitra ny hanaisotra ilay horonantsary ry zareo dia esorinay ny fandraràna.”
Na dia izany aza, voasakana ankehitriny ireo tranonkala fifampizarana horonantsary mitovy amin'ny Youtube, Veoh sy Metacafe, araka ny filazan'ny Asia Sentinel:
Veoh, a site similar to YouTube, was blocked earlier this month after a user posted a personal video purportedly of the Thai Royal Family. ICT Minister Sitthichai Pookaiyaudom has said that YouTube would be unblocked once Thailand’s internet service providers (ISPs) have installed cache engines that allow officials to block individual URLs instead of entire websites. Supposedly this was going to happen a month ago, but still today visitors get this Thai-language message when clicking on YouTube, Veoh or Metacafe: “Sorry [state telecom company] TOT as an organization of Thailand has seized the connection of this website due to certain content, messages and images that are inappropriate that have had a tremendous impact on the hearts of Thai people.”
Veoh, tranonkala iray mitovy amin'ny Youtube, no voasakana ny fiandohan'ity volana ity taorian'ny namoahan'ny mpiserasera iray horonan-tsary manokana voalaza fa ahitana ny fianakavian'ny mpanjaka. Nilaza ny Minisitry ny TIC, Sitthichai Pookaiyaudom fa hosokafana ny Youtube raha vao mametraka milina “cache” ireo mpamatsy tolotra aterineto (ISPs) ao Thailandy izay mamela ireo manampahefana hanakana ny rohy URL tsirairay fa tsy ny tranonkala manontolo. Toa nitranga tamin'ny volana lasa izany, saingy mahazo izao hafatra izao amin'ny teny Thailandey ireo mpitsidika ankehitriny rehefa miditra ao amin'ny YouTube, Veoh na Metacafe: “Miala tsiny nogiazan'ny [orinasam-pifandraisan-davitry ny fanjakana] TOT amin'ny maha-fandaminan'i Thailandy azy ny fifandraisana tamin'ity tranonkala ity noho ireo votoaty, hafatra sy sary sasany tsy araka ny tokony izy ary nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fon'ny vahoaka Thailandey. “
Miresaka am-pahasahiana momba ny filan'izy ireo sendikà sy fepetra tsara kokoa any amin'ny toeram-piasany
Fahalalahàna miteny 05 Novambra 2021
Fanoherana 13 Septambra 2021